Cabdi Qeybdiid oo sheegay ka hor labaatanka bishaan in uu bilaaban doono shirka Maamul U Samaynta Gobolada Dhexe - iftineducation.com
iftineducation.com – Madaxweynaha Maamulka Galmudug General Cabdi Xasan Cawaale (Qeybdiid), ayaa waxa uu daboolka ka qaaday in shirka Maamul U Samaynta Gobolada Dhexe, uu bilaaban doono ka hor inta aan la gaarin 20-ka bishaan.
Madaxweynaha, ayaa ku waramaaya in la dardargelin doono Dhismaha Maamulka Gobolada Dhexe (Galgaduud iyo Koonfurta Mudug), si dadka deegaanka loogu sameeyo Maamul ay ku mideysan yihiin.
Isagoo ku laabtay Galkacyo, kulana hadlaayay Saxaafada, ayaa waxa uu iftiimiyay in muddo toddobaad ah ay Magaalada Muqdisho tababar ku qaadanayaan Guddiga Farsamada, waxa xiggana uu yahay sidii loo amba qaadi lahaa Dhismaha Maamulka.
General Qeybdiid, ayaa rajo wanaagsan ka muujinaaya in muddo kooban lagu soo yagleeli doono Maamulka Gobolada Dhexe, ayna iska wada dhex arkaan dadka deegaaka.
Cadaado waxaa la dhigay gogosha Maamul U Samaynta Gobolada Dhexe, waxaana toddobaadyada soo socdo lagu wadaa inay gaaraan ergada ka qayb qaadaneysa Dhismaha Maamulkaasi.
Kol sii horeysay waxaa soo baxeysay in gogosha la dhigi doono Magaalada Dhuusa-mareeb ee Xarunta Gobolka Galgaduud, inkastoo markii dambe ay meesha ka baxday.